Hurdo Yaraantu Waxa Ay Keentaa In Qofku Uu Go’aamo Sax Ah Qaadan Kari Waayo Iyo Difaaciisa Oo Daciifa | Salaan Media
Xeeldheereyaal u dhashay dalka Ustareeliya ayaa cilmibaadhis ay ku sameeyeen waxa ku dhaca jidhka iyo maskaxda marka uu qofku hal habeen oo keliya seexan waayo, hurdada uu jidhkiisu u baahan yahay, waxa ay ku ogaadeen dhibaatooyinka caafimaad ee hoos ku xusan:
Hurdadu waa qurux
Hurdadu waxa ay qofka u kordhisaa qurux, maadaama oo ay raad togan ku leedahay dabeecadda iyo xaaladda nafsiga ah ee qofka, iyo sidoo kale muuqaalka jidheed ee qofka.
Qofku inta uu habeenkii hurdo waxa uu jidhku soo saaraa noocyo gaar ah oo ka mid ah hormoonnada koritaanka. Waxa kale oo uu jidhku soo saaraa unugyo cusub, halka uu kuwa hore ee dhibaatadu gaadhayna dib u soo kabo. Laakiin haddii uu qofku seexdo hurdo si joogto ah googo’aysa waxa ay sababtaa in maadadda Collagen ay jidhka ku yaraato. Taas oo sababta in maqaarka qofku uu waayo jileeca iyo midabka dabiiciga ah. sidaa awgeed hurdadu waa quruxda jidhka.
Garaadka oo hoos u dhaca
Hurdo yaraantu waxa ay qofka ka lumisaa fikirka garaadka ku dhisan iyo maangalnimada hadalka. Waxa ay saamayn aan toos ahayn ku yeelataa caadifadda iyo qiirada qofka. Waxa ay qofka ku abuurtaa xaalad dabeecadeed oo cadhadu ku badan tahay, awoodna aan u lahayn in uu nidaamiyo dareenkiisa.
Hurdo yaraantu waxa ay keentaa in qofku uu dooddiisa si maangal ah u dhiiban karo, waxa uu abuuraa in qofku uu lumiyo dhibirsanaanta iyo dareenka dabacsanaanta. Arrimahaas oo sabab u noqda isbeddel ku dhaca xidhiidhka bulsho ee qofka iyo dad la macaamilkiisa.
Buurni iyo xanuunnada aan laga bogsan
Hurdo yaraanta muddada dheer ahi waxa ay qofka u nuglaysaa xanuunnada aan laga bogsan ee ay ka mid yihiin wadne xanuunka, macaanka iyo dhiigkarku.
Waxa kale oo hurdo la’aanta ama hurdada oo muddo dheer qofka ku yaraataa ay keentaa miisaanka oo aad u kordha. Jidhku waxa uu caadi ahaan soo saaraa Hormoonka ‘Leptin’ oo shaqadiisu la xidhiidho isticmaalka tamarta. Haddaba haddii ay hurdadu ku yaraato, waxaa jidhka ku yaraada hormoonka ‘Leptin’ jidhkuna si uu uga jawaabo hoos u dhacaas hormoonka waxa ay maskaxdu soo saartaa xaddi badan oo ah hormoonka ‘Ghrelin’ oo qofka ku keena gaajo. Waana sababta marka uu qofku saacado dambe oo habeenkii ah seexdo, uu u soo kaco isaga oo gaajaysan, xitaa haddii uu habeennimadii hurda fiican seexday.